Diyaarad Drone Ah Oo Markale Kusoo Dhacday Deegaanka Beerxaani Ee Duleedka Kismaayo.
Wednesday January 31, 2018 - 11:17:55 in Wararka by Super Admin
Markale diyaarad Basaas oo dowladda Mareykanka leedahay ayaa kusoo dhacday deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay gacanta ku heyso Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Wararka imaanaya gobollada Jubbooyinka gaar ahaan duleedka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in diyaarad nuuca wax basaasa ah ay kusoo dhacday inta u dhaxaysa magaalada Kismaayo iyo deegaanka Beerxaani oo isbuucii lasoo dhaafay sidaan oo kale diyaarad Drone ah ugusoo dhacday.
Saraakiil katirsan Xarakada Al Shabaab oo ku sugan duleedka magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaraddu ay kusoo dhacday deegaanada loo yaqaan Beerxaani xilli halkaas ay muddo saacada ah dul heehaabaysay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen burburka diyaaraddan oo loo malaynayo in ay leedahay dowladda Mareykanka ee sida tooska ah ugu lugta leh duullaanka lagusoo qaaday dalka Soomaaliya, ciidamo katirsan Al Shabaabayaa ayaa gacanta ku dhigay diyaaradan waxayna ula dhaqaaqeen goob amni ah.
Diyaaradaha wax duqeeya ee aan duuliyaha laheyn iyo kuwa wax basaasa ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay iyagoo dul heehaabaya deegaanno katirsan gobolka Jubbada Hoose oo Al Shabaab ay maamusho.
Diyaaraddan kusoo dhacday deegaanka Beerxaani ee duleedka Kismaayo ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamo Mareykan ah ay ka dhaq dhaqaaqyo ka wadeen deegaanno galbeedka iyo Waqooyiga uga toosan maagalada xarunta u ah Jubbada Hoose.
Waa diyaaraddii 2-aad oo 10 Maalmood gudahood Dowladda Mareykanka ugasoo dhacda duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose balse illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Taliska ciidanka Mareykanka AFRICOM oo ku aaddan diyaaradaha ugasoo dhacay Koonfurta Soomaaliya.